काठमाडौँका निजी विद्यालयको शुल्कमा कडाइ गर्ने सङ्केत !
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको भित्री तयारी बाहिरिएपछि निजी स्कुलका सञ्चालकहरू कुदाकुद गर्न थालेका छन् । बालेनले सस्तो, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कदम चालेपछि स्कुलका मालिकहरू नेताका घर धाउन थालेका हुन् । काठमाडौँ महानगर…
काठमाडौं । शुक्रबार २ घण्टा मात्र खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक १३ अंक माथिले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस दिन नेप्से सूचक १३.७८ अंकले बढ्दै १८६२.०६ अंकमा उक्लिएको हो । उसो त १३…
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया दिनेश थपलियाले मंसिर १० गतेभित्र प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सक्ने गरी आयोगको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा उनले आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको…
मेघ नाथ पहाडी ४ घण्टा अगाडि
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको भित्री तयारी बाहिरिएपछि निजी स्कुलका सञ्चालकहरू कुदाकुद गर्न थालेका छन् । बालेनले सस्तो, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कदम चालेपछि स्कुलका मालिकहरू नेताका घर धाउन
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले विदेश विभाग प्रमुखमा नवीन पाण्डेलाई मनोनित गरेको छ । बुधबार बसेको एन्फाको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पहिलो बैठकले उनलाई विदेश विभाग प्रमुखमा मनोनित गरेको हो
काठमाडौं । एसिया-युरोप राजनीतिक फोरमको अध्यक्षमा आगामी दुई वर्षका लागि नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य डा. राजन भट्टराई निर्वाचित भएका छन् । चेक रिपब्लिकको राजधानी प्रागमा